Te ho dadany foana… • AoRaha
Te ho dadany foana…
Tsy miova mihitsy ilay rangahy ! Mihevitra azy ho tsy misy mahasolo mihitsy sa dia tena voaporofo ara-tsiansa fa tsy misy raha manjary mihitsy eto amin’ity firenena ity rehefa tsy eo Ingahirainy? Te ho dadany foana Ravalomanana Marc eto Madagasikara. Tsy misy toa azy!
Tsy misy maharatsy an’izany anefa. Safidiny manokana io! Nefa raha ny marina, efa tsy fotoanany intsony izao ho an’Ingahy Ravalomanana.
Mety aminy ny misotro ronono am-pilaminana. Saingy mila mihavana tsara amin’ny mpitondra aloha, raha te hampandroso ny orinasany. Tsy kapoakany intsony izany hoe hiatrika fifidianana. Saingy mampalahelo fa ireto mpisolelaka manodidina, izay mpanipy hoditr’akondro no mitady hampijoboka azy any amin’ny lalina. Aleo mihatakataka fa olon-dehibe, tahaka ireo Filoham-pirenena teo aloha. Mba homeo ny tanora amin’izay sehatra fa aza dia tia mijijy loatra sao ho voafingana ambony fa hibaby fahafaham-baraka! Tena “sérieux” io fa aza ihomehezana!
Hodongiana daholo izao toerana rehetra izao, Filoham-pirenena, filohan’ny mpanohitra, filohan’ny Tim, filohan’ny Rodobe, filohan’ny tanàna…Miharihary izao fa seza sy fahefana no tena mahamaika fa tsy fitiavan-tanindrazana sy fampandrosoana velively. Mafy mihitsy lehiretsy izany te ho dadany eto amin’ny tanàna a!
Fanovana governemanta Hanolotra minisitra koa ireo depiote
Fandikan-dalana amin’ny fifidianana :: Hanampy an’ireo mpitory amin’ ny fanangonana porofo ny FES
Fivahinianana any Afrika Atsimo